‘WAALI-CAS’ – Casaankii Luiz Ee Kulankii Xalay Oo Dhaliyay Dood Addag – Garsoore Sports
‘WAALI-CAS’ – Casaankii…
Cayaaryahanka reer Brazil ayaa lugta uga istaagay Willian Jose isagoo ku jira diilinta ganaaxa oo cidna aysan ka dambeyn wax yar kahor qeybtii nasashada ee kulankii Wolves iyo Arsenal, dhacdadaaasi ayaa keentay dood badan.
Arsenal ayaa si buuxda gacanta ugu haysay kulankii Wolves ee ka dhacay garoonka Molineux Talaadadii, kahor inta uuna David Luiz qalad ku galin Willian Jose islamarkaana casaan toos ah loo taagin.
Gunners ayaa la timid gool iyadoo ay uga mahadcelineyso Nicolas Pepe oo kaligiis dadaal sameeyay laakiin ciyaarta ayaa loo rogay madaxeeda iyadoo qaladka Luiz uu yimid waqtigii dhimashada ee qeybtii hore cayaarta.
Willian Jose ayaa loo tuuray kubbad hoose isagoo ku sugnaaday gadaasha daafaca Gunners halka Luiz uu isna aad ugu dhowaaday islamarkaana lugaha isaga dhuftay, iyadoo weeraryahanka Wolves uu diyaar u yahay inuu laado kubbada.
Daafaca reer Brazil ayaa u muuqday mid duubaya Jose markii uu u ordayay dhanka goolka, isagoo dhulka u diray saxiixa dhawaan ay kala soo wareegtay Real Sociedad. Garsoore Craig Pawson ayaa si deg-deg ku abaalmariyay Wolves rigoore wuxuuna siiyay Luiz casaan toos ah kaddibna waxaa dib loo eegay VAR, labada go’aanba waa la taageeray.
Ruben Neves ayaa gool u badalay rigoore loo dhigay iyadoo ciyaartu ay noqon doonto mid qaybtii hore lagu kala nastay 1-1.
Sheekada ayaa usii xumaatay Gunners qeybtii labaad, iyadoo Joao Moutinho uu hoggaanka u dhiibay Wolves daqiiqadii 49aad ee cayaarta markii uu kubad qurux badan ka laaday meel fog.
Bernd Leno ayaa markaa kaddib qalad weyn sameeyay markii uu ka soo baxay sanduuqiisa isla markaana uu kubbada gacanta ku qabtay, taasoo ku qasabtay garsooraha inuu soo saaro casaan labaad isla markaana uu Arsenal ka dhigo 9 cayaaryahan.
Gunners ayaa guuldarro 2-1 kala kulantay kooxda tababare Nuno Espirito Santo, kaasoo ku guuleystay kulan Premier League ah markii ugu horeysay tan iyo bishii December 15.
Si kastaba ha ahaatee falcelinno ku aadan in casaanka uusan sax ahayn ayaa soo baxaysay taniyo xalay.
Khabiirka cayaaraha ee Goal.com Charless Wyatt ayaa yiri
“Ujeedo kama ahayn Luiz, Craig Pawson wuxuu moodayay inuu casaan yahay, balse waxay u baahneeyd inuu VAR si fiican u eego kahor inta uusan bixin casaanka”
” Willian Jose lugtiisa ayuu gadaal usoo celiyay si uu u laado, Luizna jilibkiisa ayaa ku dhacay”
Falcelinno badan ayaa la isku weydaarsanayay barta Twitter-ka taasoo ku aadan casaankii xalay loo taagay cayaaryahan David Luiz.
Halkan hoose ka aqriso qaar kamid ah.
“Marnaba ma noqonayo mid difaaca David Luiz balse taasi si waali ah ayay u darantahay.”
“Taasi maahan kama, Marka Luiz uu qeyb ka yahay. Waan ka xumahay.”
“Taniyo kulankiisii ugu horreeyay ee Arsenal August 2019, David Luiz ayaa qaatay 3 casaan ah isagoo keenay 6 gool-ku-laad.
Ma jiro cayaaryahan kale oo Premier League-ga ka cayaara oo helay in ka badan 2 casaan ah amaba keensaday in kabadan 3 gool-ku-laad”
9 – Since Mikel Arteta's first game in charge of Arsenal on Boxing Day 2019, the Gunners have been shown nine Premier League red cards, six more than any other side. Freefall. pic.twitter.com/MHMtEUiDsX
“Taniyo kulankiisii ugu horreeyay ee tababare Arteta, Arsenal ayaa loo taagay 9 kaar oo cas waana in kabadan 6 jeer koox walba mudadii uu macalinka u ahaa”